Vaovao - Ilay “Vata fampangatsiahana” taloha
Kitapo misy ranomandry tsindrona rano
Kitapo ranomandry hydrate
Kitapo mangatsiaka eo noho eo
Voaravaka Box Liner
Vata misy baoritra fisorohana
Ilay “vata fampangatsiahana” taloha
Ny vata fampangatsiahana dia nitondra tombony lehibe amin'ny fianan'ny olona, ​​indrindra amin'ny fahavaratra mangatsiaka dia ilaina tokoa izany. Raha ny tena izy dia teo am-piandohan'ny Dinasti Ming, lasa fitaovana fahavaratra lehibe izy io, ary nampiasan'ny andriana ambony
Ny vata fampangatsiahana dia nitondra tombony lehibe amin'ny fianan'ny olona, ​​indrindra amin'ny fahavaratra mangatsiaka dia ilaina tokoa izany. Raha ny tena izy dia teo am-piandohan'ny Dinasti Ming, lasa fitaovana fahavaratra lehibe izy io, ary nampiasan'ny andriana ambony tao an-drenivohitra Beijing. Mazava ho azy fa tsy vata fampangatsiahana izany, fa boaty nampangatsiahina tamin'ny ranomandry voajanahary.
Tamin'izany fotoana izany, ny vata fampangatsiahana dia nantsoina koa hoe "siny gilasy", vita amin'ny hazo poara mahogan na mahogany. Ilay boaty miendrika toradroa dia toa tsara tarehy miaraka am-bava lehibe sy ambany ambany ary tadim-by roa amin'ny valahana. Ny peratra varahina dia apetraka amin'ny lafiny roa amin'ny boaty mba hikarakarana mora, tongotra efatra ao ambanin'ny fitoeran-fotaka (ao amin'ny fanaka Ming sy Qing Dynasties, ny tongotra sy tongotra sasany dia tsy mikasika ny tany, ary hazo hazo fijaliana na hazo fisaka hafa eo ambanin'ny tohana , ity vatan-kazo ity dia antsoina hoe "tray amin'ny fotaka") hialana amin'ny hamandoana.
Ny vata fampangatsiahana dia tsy vitan'ny hoe tsara tarehy, fa koa ny famolavolana asa dia be pitsiny amin'ny siansa. Ny ampahany anatiny ao anaty boaty dia vita amin'ny tinitra izay afaka miaro ilay boaty hazo tsy ho simba ary ao amin'ny fanambanin'ny boaty, dia misy lavaka fisotroan-dranomandry mandalo ao ambany. Ankoatr'izay, rehefa mitsonika ny ranomandry, dia mifoka rivotra mafana avy ao amin'ny efitrano izy, miasa toy ny etona misy antsika ankehitriny.
Amin'ireo vata fampangatsiahana sisa tavela, roa sisa tavela ao amin'ny tranombakoka Palace in Beijing izay natolotr'i Ramatoa Lu Yi tamin'ny 1985. Ity vata fampangatsiahana vita amin'ny hazo enina ity dia tariby - tenona, milanja 102kg ny lanjan'ny boaty tsirairay, 45cm ny haavony. Ny fonony sy ny vata boaty dia voaravaka voninkazo rantsan-kazo nofonosina miaraka amina fahagagana kanto sy loko marevaka.
Ny any ivelany dia manana "Natao ho an'ny Emperora Qing Qrianlong Qianlong" Tena harena amin'ny asa-tanana vita amin'ny vata fampangatsiahana izany.
any Beijing renivohitra. Mazava ho azy fa tsy vata fampangatsiahana izany, fa boaty nampangatsiahina tamin'ny ranomandry voajanahary.
Raha ny marina, ilay vata fampangatsiahana hazo voalaza etsy ambony dia tsy ilay voalohany indrindra ao Shina. Ny vata fampangatsiahana voalohany dia nino fa entana varahina tamin'ny vanim-potoanan'ny lohataona sy fararano, antsoina hoe fitaovana misy ranomandry, izany hoe "Bingjian 'amin'ny teny sinoa.
Tamin'ny 1978, andiana divay misy ranomandry maridrefy roa - Bronze Jian Fou, fantatra ihany koa amin'ny hoe "Bingjian", miaraka amin'ny endrika sy firavaka mitovy aminy, ireto Bingjian roa ireto dia nalaina tamin'ny fasan'i Marquis Yi avy any Zeng any Suizhou, Provinsi Hubei , ary ankehitriny dia natokana hitokana ao amin'ny Museum Museum Provincia Hubei sy National Museum of China. Hatreto aloha dia io no hita fa fitaovana tsara indrindra misy divay misy ranomandry misy vanim-potoana pre-qin lehibe indrindra sy feno indrindra. Ity Jian Fou varahina ity dia nekena ho "vata fampangatsiahana" tranainy indrindra any Chine. Ny "Ice Kam" dia kaontenera iray mitazona gilasy ary mametraka sakafo ao aminy amin'ny andro mafana.
Fotoana fandefasana: Jul-18-2021